किन र कसरी एउटा Gravatar खाता सेट अप गर्न Martech Zone
किन र कसरी एउटा Gravatar खाता सेट अप गर्न
शनिबार, जुलाई २१, २०१। बुधबार, जुलाई 22, 2015 Douglas Karr
प्राधिकरण बढाउने र खोजी ईन्जिनको स्तर सुधार गर्ने एक निरपेक्ष तपाईंको साइट, ब्रान्ड, उत्पादन, सेवा वा व्यक्तिहरू बारे प्रासंगिक साइटहरूमा उल्लेख प्राप्त गर्दैछ। सार्वजनिक सम्बन्ध पेशेवरहरू प्रत्येक कुराकानीमा यी कुराकानीहरू पिच गर्दछन्। तिनीहरू पहिचान गर्दछन् कि उनीहरूका ग्राहकहरूलाई ध्यान दिएर अनलाइन ड्राईभ गर्ने कि ब्रान्ड मान्यता। एल्गोरिथ्म परिवर्तनको साथ, यो तपाईंको प्राथमिक सुधार गर्ने एक प्राथमिक रणनीति पनि हो कुञ्जी शब्द श्रेणीकरण खोज ईन्जिनहरूमा।
कहिलेकाँही हामीसँग अन्तर्वार्ता लिने वा उत्पादनहरू लेख्ने अवसर हुँदैन तर पिच यति राम्रो छ कि हामी पीआर पेशेवरलाई उनीहरूको ग्राहकलाई लेख्न आमन्त्रित गर्दछौं। अतिथि पोस्ट। लेख सामान्यतया यो सगाईको सबैभन्दा सजिलो हिस्सा हो, कम्पनीहरूले लेख प्रदान गर्न चाहने भन्दा बढी हुन्छन्। हामी तिनीहरूको लागि केहि आवश्यकताहरू सेट गर्दछौं:
सामग्री 500०० र १,००० शब्दहरू बिच राख्नका लागि प्रयास गर्नुहोस्।
मार्केटरहरूले समस्याको परिभाषा गर्नुहोस् र आधारलाई समर्थन गर्ने संसाधनहरूको साथ केहि तथ्या statistics्कहरू प्रदान गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
समस्या समाधान गर्नका वरिपरि उत्तम अभ्यासहरू प्रदान गर्नुहोस्।
यदि तपाईंसँग टेक्नोलोजी समाधान छ भने, यसले कसरी मद्दत गर्दछ भनेर विवरण प्रदान गर्नुहोस्।
स्क्रिनशटहरू, रेखाचित्रहरू, चार्टहरू वा विशेष गरी - समाधानको भिडियो समावेश गर्नुहोस्।
हामीलाई डेडलाइन चाहिदैन, तर हामीलाई प्रगतिको बारेमा सूचित राख्नुहोस्।
सँग लेखक दर्ता गर्नुहोस् Gravatar र हामीलाई लेखकको ईमेल ठेगाना प्रदान गर्नुहोस् उनीहरूले दर्ता गर्न प्रयोग गरे।
लेखक हाम्रो न्यूजलेटरमा थपिनेछ र अनुगमनको लागि सिधा सम्पर्क हुन सक्छ। यदि पोष्ट लोकप्रिय छ भने हामी शीर्षक बारे पोडकास्ट पनि गर्न सक्छौं।
ग्रेवाटरको साथ लेखक दर्ता गर्नु आवश्यक छ तिनीहरूले छवि नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ जुन तिनीहरूको लेखक प्रोफाइलमा प्रदर्शित छ। यो बिना, हामीलाई निरन्तर सोधिन्छ लेखक फोटोहरू अपडेट गर्नुहोस् र हामी यो प्रबन्ध गर्न चाहँदैनौं। Gravatar एक सरल सेवा हो र लेखक को उपयोग को लागी सबै भन्दा राम्रो चासो मा ताकि उनीहरु को वेब मा एक पहचानने योग्य छवि प्राप्त गर्न सक्दछ - केवल हाम्रो साइट मा।
एक ग्रेवाटर के हो?
Gravatar वेबसाइट बाट:
एक "अवतार" एक छवि हो जुन तपाइँलाई अनलाइन प्रतिनिधित्व गर्दछ - सानो तस्वीर जुन तपाइँको नामको छेउमा देखा पर्दछ जब तपाइँ वेबसाइटहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ। एक Gravatar एक हो ग्लोबली मान्यता प्राप्त अवतार। तपाईंले यसलाई अपलोड गर्नुभयो र तपाईंको प्रोफाईल एक पटक सिर्जना गर्नुहोस्, र त्यसपछि जब तपाईं कुनै Gravatar सक्षम गरिएको साइटमा भाग लिनुहुनेछ, तपाईंको Gravatar छवि स्वचालित रूपमा त्यहाँ तपाईंलाई पछ्याउँदछ। Gravatar साइट मालिक, विकासकर्ता, र प्रयोगकर्ताहरूको लागि एक नि: शुल्क सेवा हो। यो प्रत्येक WordPress.com खातामा स्वचालित रूपमा समावेश छ र द्वारा चलाइएको र समर्थित छ Automattic.
हामी Gravatar किन प्रयोग गर्छौं?
व्यक्तिहरू उनीहरूको प्रोफाईल फोटोहरू उनीहरूको सामाजिक मिडिया साइटहरूमा परिवर्तन गर्दछन्। तिनीहरूले कपाल स्टाइलहरू परिवर्तन गर्न सक्दछन्, वा नयाँ, पेशेवर फोटो पनि लिन सक्दछन्। यदि तपाइँले प्रकाशनको लागि लेख लेख्नु भएको छ भने कसरी तिनीहरूले तपाइँको फोटोलाई भर्खरको र सबैभन्दा ठूलोमा अद्यावधिक गर्छन्? उत्तर छ Gravatar.
WordPress मा, लेखक फोटो लेखकको ईमेल को एक ईन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग को माध्यम बाट प्राप्त गरीएको छ। लेखकको ईमेल ठेगाना सार्वजनिक रूपमा कहिले पनि प्रदर्शित हुँदैन। र Gravatar खाता तपाईं एकाधिक ईमेल ठेगानाहरू खातामा बहु छविहरूको साथ प्रबन्ध गर्न अनुमति दिनेछ।
टैग: लेखकलेखक प्रोफाइलअवतारGravatar
Re कारणहरू तपाईंको बिक्री टीम तिनीहरूको कोटामा पुग्न सकेन
रेशम: डाटा र स्प्रिडशिटलाई प्रकाशित दृश्यहरूमा परिवर्तन गर्नुहोस्
यदि तपाईं यो Gravatar वेब मा कहीं पनि देख्नुभयो, यो म हो!
अक्टूबर २१, २०१ at २:०18 बिहान
म Gravatar प्रयोग गरिरहेको छैन तर यसको सट्टामा म MyAvatar प्रयोग गर्दछ जुन WordPress मा प्लगइन हो।
यसले उस्तै चीज हुन अनुमति दिँदछ तर यो मात्र हो कि देखाइएको अवतार MyBlogLog मा उस्तै हुनेछ।
यसले धेरै चीजहरू सजिलो बनाउँदछ किनकि प्रायः पाठकहरूले ब्लुगपिंगको लागि अवतार अपलोड गर्न थप कदम चाल्दैनन्। 🙂
म gravatars मन पर्छ र म खुशी छु कि तिनीहरूले यो हासिल गरेका थिए। आशा छ, यो WordPress को अर्को संस्करण मा लाग्दछ जस्तो ...
मा gravatars को एक राम्रो समीक्षा छ http://www.thetechbrief.com/2007/10/12/get-yourself-a-gravatar-while-theyre-still-hot/
र अब यो पूर्ण रूपमा नि: शुल्क सेवा हो - धेरै अवतारहरू र ईमेल आईडी थप्नुहोस् जुन तपाईं चाहानुहुन्छ 🙂
जनवरी १, २०१ 8 १२::2008 अपराह्न
मैले वास्तवमा ग्रेभाटर वर्ग सिर्जना गरेको छु यदि तपाईं मेरो नाममा लिंक क्लिक गर्नुभयो भने। शिथिल जोडी र सपना जस्तो काम गर्दछ - यसमा अवतारको समयावधि समाप्ति मिति सहित क्याच पनि छ - लोडि on समय बचत गर्न। यसले केवल स्थानीय रूपमा अवतार लोड गर्न सक्छ।
एडम @ टकपीएचपी.कॉम